ရီစရာဟာသလေးများ | အိမ့်မှူးသော်
ကလေး. ၊ ဖေဖေ၊ သားကို ဘယ်လိုမွေးလာတာလဲဟင်
ဖခင် ၊ အေး၊ ငါ.သား။ မင်းတစ်နေ.နေ.မှာသည်လိုမေးမှာပဲလို.ငါတွက်ထားတာကွ၊
ဒီလိုကွာ။ မင်းအမေနဲ.ဖေဖေ chat room မှာ chattingလုပ်ရင်းသိခဲ့ကြတယ်။နောက်
cyber cafe ဆိုင်တွေကနေ email တွေအပြန်အလှန်ပို.ကြတယ်၊
ဒီလိုနဲ.နောက်ဆုံးမင်းအမေက ဖေဖေ.ကို download လုပ်နုိုင်တယ်လို.ခွင့်ပြူတယ်။
သူကလည်းဖေဖေ.ကို uploaded ပြန်လုပ်တယ်၊ဖေဖေတို.နှစ်ယောက်လုံး firewall ချမထားမိဖူး၊
ပြီးတော့ delete buttonကိုလည်းမနှိပ်မိဖူး၊
နောက် ကိုးလကြာတော. မင်းကိုရလာတာပေါ.၊
အဲသည်အချိန်ကvirous အကိုက်မခံလိုက်ရတာလည်းပါတာပေါ.၊ current ကလည်းလုံးဝမှန်နေခဲ.တာ၊
``ဟေ့ကောင်၊လေထီးမပါဘဲ ခုန်ဆင်းမလို့လား မင်းရူးနေသလားကွ ဟေ..´´ ``ဘာဖြစ်လို့လဲ´´´´အပြင်မှာ မိုးရွာနေတယ်လေကွာ။´´ မှီနိုင်သေးတယ်
အမျိုးသမီး၏နောက်သို့လူငယ်တစ်ယောက် ပြေးလိုက်လာပြီးပြောသည်။ ``ဒိမှာခင်ဗျာ၊ ဒိမှာခင်ဗျာ´´အမျိုးသမီး ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး မေးသည်။ ``ကျွန်မကိုခေါ်တာလား ဘာကိစ္စလဲ´´``ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ထီးမေ့ကျန်ခဲ့တာ ခင်ဗျားလား´´ အမျိုးသမီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည်။ ``ဟုတ်ပါရဲ့ ကျွန်မ ထီးမေ့ကျန်ခဲ့တယ်´´``အဲဒါဆိုမြန်မြန်ပြေးလိုက်၊ကားကအခုမှ စထွက်ကာစပဲရှိသေးတယ်။´´
လူနာ။ ။ဆရာ ခုတစ်လော ကျွန်တော်အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်ဆရာ အဲဒါဘယ်လို အနားယူရင်ကောင်းမလဲလို့ပါ
ဒေါက်တာ။ ။ကျွန်တော်ကတော့ပင်ပန်းလာရင် ကျွန်တော့မိန်းမရဲ့ပခုံးလေးမှာမှီပြီးတော့ သီချင်းနားထောင်တယ် အကြင်နာတွေပေးကြတယ် အိပ်ရင်လည်း မိန်းမကို ဖက်ပြီးအိပ်တယ်ဗျ အဲဆိုပင်ပန်းတာတွေသက်သာသွားတတ်ပါတယ်
လူနာ။ ။ဟင် တကယ်လားဆရာ ကျေးဇူးပါပဲ ဒါနဲ့ဆရာ့မိန်းမ အိမ်မှာ ဘယ်အချိန်ရှိတတ်ပါသလဲ
ဦးလှတို့လင်မယားပွဲတက်လာကြ၏ မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်တွေ့သဖြင့် ဦးလှကမိတ်ဆက်ပေး၏
မိန်းမ။ ။ဒေါက်တာရှင် ဘယ်အဆိပ်မျိုးသုံးရင် ယောင်္ကျားက်ိုတစ်ခါတည်း အသေသတ်နိုင်ပါသလဲ
ဒေါက်တာ။ ။အိုး ကျွန်တော်က ဥပဒေဘွဲ့နဲ့ဒေါက်တာရထားတဲ့သူပါ
မိန်းမ။ ။အဲဆို ဘယ်နည်းနဲ့ယောင်္ကျားကိုသတ်ရင် ပြစ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်မလဲ
Myat Pan Nwe (မြတ်ပန်းနွယ်) 8:21 PM
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးရယ်မိစေသော ဟာသလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။